“Aadaan ummata dhaggeeffachuu dagaaguu qaba” -Madrak
“Aadaan ummata dhaggeeffachuu dagaaguu qaba” -Madrak Featured
Akkuma, “Tokkummaan humna” jedhamu Saboota, Sablammootaafi Ummattoonni biyyattii tokkummaan yoo wajjummaan jiraatan hiree Itoophiyaa murteessu.
Ijaarsa sirna dimokraasii keessatti abbaan aangoo ummata waan ta’eef fedhii ummataatiif dursa kennuun dirqama. Kun ammoo dimokraasii gabbisuun alatti ummatni aantummaan dhimma biyyaa keessatti akka hirmaatu taasisa.
Gaariis ta’e aariin ija ummataa jalaa dhokachuu waan hindandeenyeef kan biyya guddisu tumsuufi kan biyya miidhu dhabamsiisuu keessatti shoorri ummataa olaanaadha. Ta’us biyya keenya keessatti haalli kun yeroo ammaa qabatamaan wayita ilaalamu daran laafaa ta’uudha paartiileen morkattootaa tokko tokko ni dubbatan.
Torban darbe Paartiin Madirakii Tokkummaa Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa (Madirak) haala jeequmsa dhaabbilee barnoota olaanaa tokko tokko keessatti uumameefi walitti bu’iinsa Oromoofi Sumaalee Itoophiyaarratti ibsa kennee ture.
Hoogganaa ittaanaafi dura taa’aan imaammata dhimma alaa paartichaa, Piroofesar Bayyanaa Pheexiroos akka jedhanitti, paartii biyya bulchuu ummata dhaggeeffachuu dadhabuurraa kan ka’e biyyi rakkoo hamaa keessa gala jirti. Walitti bu’iinsi sabummaa bu’uureffatee dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti raawwatamu seenaa biyya kana keessatti gocha gonkumaa ta’ee hinbeekneefi aariin ummataa sadarkaa olaanaarra ga’uusaa kan agarsiisudha jedhu.
Gama biraatiin ammoo ummanni baroota dheeraaf walkabajee waliin jiraataa ture ija shakkiitiin walilaaluurra darbee waraana walirratti banaa jiraachuun taatee qabatamaan mul’atu ta’uu eeru.
Hoogganaan quunnamtii ummataa paartichaa, Obbo Mulaatuu Gammachuu gamasaaniin sirna federaalizimii filannoo ummattoota biyyattiitiin ijaarameefi heera ummattoonni biyyattii fedhiisaaniin walitti dhufanii tumatan jalatti olaantummaan seeraa cabuun jibbi babal’achaa dhufuu agarsiisa jedhu. Kanaaf agarsiistuun walitti bu’iinsa naannawa daangaatti ummata Oromoofi Sumaalee Itoophiyaa gidduutti uumameedha jedhu.
Ummattoonni kunneen baroota dheeraaf nagaadhaan waliin jiraachuun alatti lachuu hortee ilmaan Kuushi. Ta’us walitti bu’iinsa uumameen badiin lubbuufi mancaatiin qabeenya hedduu dhaqqabeera. Ummatni Oromoo miliyoonatti hiiqus buqqa’eera jedhu.
Akka isaan jedhanitti, ummatni Sidaamaa 700 ol ta’u qe’eesaarraa buqqaa’eera. Gochi walfakkaatu bakkeewwan biroottis mul'ateera. Warreen kunniin rakkoo bal’inaan yeroo ammaa mul’atan kaasne malee bakkawwan gara garaatti rakkoon jira.
Mootummaan rakkoolee gaaffii mirgaan walqabatanii ka’an mariidhaan furuurra qaamole nageenyaa humnaa ol fayyadamaa jiraachuun rakkoolee mudatan daran hammeesseera.
Ibsicharraa hubachuun akka danda’ametti barattoonni dhaabbilee barnoota olaanaa waa’ee biyya ofii bira darbanii namoota waa’ee addunyaa qoratan ta’uunsaanii hundaafuu ifa. Ta’us mootummaan gaaffii barattootaatiif gurra kennuurra waan humnootni keessaafi alaa jeequmsicha kakaasan fakkeeffamee dhiyaachaa jira jedha paartichi.
Sirni ittigaafatamummaa laafaa waan ta'eef namootni walitti bu’iinsa hammeessan, badii lubbuufi qabeenyaa raawwatan seeratti dhiyeessuu caalaa dhimmicha qoratamaa jira yaadni jedhu irra deddeebiin ibsamuu malee furmaanni kennamaa hinjiru jechuun Madrak adeemsa jiru qeeqeera.
Torban kana/This_Week 43564
Guyyaa mara/All_Days 1468344